စိုးရိမ်​​ကြောင့်ကြ ပူပန်​မှု​တွေက ​သွေးတိုး​စေသလား - YOYARLAY Digital Media and News
စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ဖိအားတွေ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေက ယေဘူယျအားဖြင့် အတူတူပါပဲ။
ဒါကြောင့် ဒီလို စိတ်အခြေအနေတွေနဲ့ သွေးတိုးခြင်းကို တွဲမြင်ကြတာ အံ့ဩစရာ မရှိပါဘူး။တကယ်လို့ စိတ်အခြေအနေနဲ့ သွေးတိုးက ဆက်စပ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာက အရင်လာမလဲ။ ဒီစိတ်အခြေအနေတွေက သွေးတိုးဖြစ်စေတဲ့ ယေဘူယျ အကြောင်းခံတွေလား ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၁၀၀ လောက်က သွေးတိုးရှိနေတဲ့သူတွေကို လေ့လာမှုတွေထဲက အစောဆုံး လေ့လာမှုတွေမှာ လုပ်ငန်းအကြီးစားရဲ့ ဒါရိုက်တာလို လူမျိုးတွေ အလုပ်ဝန်ပိမှုကြောင့် သူတို့ရဲ့ စိတ်အခြေအနေမှာ မူမမှန်တာမျိုးတွေ ရှိလာပြီး စိတ်လှုပ်ရှားလာတတ်ကြပါတယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး “hypertensive personality” (သွေးတိုးဖြစ်စေတဲ့ ပင်ကိုစရိုက်) ရှိလား မရှိလားဆိုတဲ့ ငြင်းခုံမှုတွေ စတင်ခဲ့တယ်။
တချို့က သွေးတိုးရှိနေတဲ့ လူနာတွေဟာ သူတို့ရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ စတဲ့ စိတ်အခြေအနေတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ကြပေမယ့် တချို့ကတော့ ဒေါသကို ထိန်းချုပ်ထားရကြောင့် ဖြစ်တာ ပိုများတယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ မတူညီ ကွဲပြားတဲ့ ထင်မြင်ချက်များစွာ ရှိပါတယ်။
စိုးရိမ်မှုနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေက ခဏတာ သွေးတိုးတက်စေပေမယ့် နာတာရှည် သွေးတိုးရောဂါကို ဖြစ်မလာစေပါဘူး။ ဒီအချက်က နာတာရှည် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု ဝေဒနာ ခံစားနေရသူတွေမှာ ပါမှန်ပါတယ်။ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ထွက်တဲ့ ဟော်မုန်းတစ်မျိုးက နှလုံးခုန်နှုန်းကို မြန်စေပြီး သွေးကြောလေးတွေကို ကျဉ်းသွားစေပါတယ်။ ဒီအချက်နှစ်ချက်က သွေးတိုးစေပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ သွေးတိုးက သွေးလွှတ်ကြောရဲ့ သွေးဖိအားကို ၃ဝရာခိုင်နှုန်းကနေ ၄ဝရာခိုင်နှုန်းထိ တိုးလာစေပါတယ်။ ဒီပြောင်းလဲမှုတွေက ခဏတာပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ထွက်တဲ့ ဟော်မုန်းတွေ ပျက်စီးသွားတာနဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းတွေ သွေးကြောတွေနဲ့ သွေးဖိအားတွေက ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
နာတာရှည် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ ဝေဒနာရှင်တွေမှာ သူတို့ရဲ့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုကြောင့် သွေးတိုးတက်တာမျိုး မရှိပါဘူး။ သူတို့တွေရဲ့ အာရုံကြောနဲ့ နှလုံးသွေးကြောစနစ်က စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် အချိန်မလပ် ထွက်နေတဲ့ နာတာရှည် ဟော်မုန်းတွေကြောင့် ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။
စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု ရောဂါမရှိတဲ့သူတွေလည်း စိုးရိမ်ကြောင့်ကြတတ်သလို နာတာရှည် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု ရောဂါရှိနေတဲ့သူတွေလည်း စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု ပိုများလာတဲ့ အခြေအနေမျိုး ရှိပါတယ်။ အဲလိုအခြေအနေတွေမှာ သွေးတိုးနှုန်း တက်လာတာက အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုဟာ သွေးတိုးတက်ခြင်းကို အကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေကို သွေးတိုးဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေလို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ခဏတာ သွေးတိုးတက်ခြင်းကလည်း နာတာရှည် သွေးတိုးလိုပဲ ဆိုးကျိုးများပါတယ်။ ဒီ မတူညီတဲ့ အခြေအနေ နှစ်ခုမှာ သွေးကြော၊ နှလုံးနဲ့ ကျောက်ကပ်ထိခိုက်မှုတွေ ကတော့ တူညီနေပါတယ်။
ခဏတာ သွေးတိုးတက်တဲ့အကြိမ်ရေ များလာတာနဲ့အမျှ ထိခိုက်မှုတွေကလည်း များလာပါတယ်။ သွေးတိုးတက်တဲ့ အခြေအနေ နှစ်ခုလုံးဟာ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ ထိခိုက်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ ဖြစ်ခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်းအပြင် နောက်ဆုံး သေဆုံးတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နာတာရှည် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု ရောဂါက ကိုယ်တွင်း အင်္ဂါတွေကို ဘယ်လိုထိခိုက်စေသလဲ ?
စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုက နာတာရှည် သွေးတိုးကို မဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် ခဏခဏ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကို ခဏခဏ သွေးတိုးစေနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ စိုးရိမ်မှုကြောင့် သွေးတိုး ခဏခဏ တက်နေမယ်ဆိုရင် နာတာရှည် သွေးတိုးရောဂါလိုမျိုးပဲ သင့်ရဲ့ သွေးကြောတွေ နှလုံးနဲ့ ကျောက်ကပ်တို့ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ သင့်မှာ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု ခဏခဏဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်း ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း အရက်သောက်ခြင်း အစားအလွန်စားခြင်းစတဲ့ သွေးတိုးဖြစ်စေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို လုပ်လာနိုင်ပါတယ်။
စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုနဲ့ တခြား စိတ်ရောဂါတွေကို ကုသတဲ့ Serotonin နဲ့ Norepinephrine reuptake inhibitors တွေလို ဆေးတချို့ကလည်း သွေးတိုးတက်စေပါတယ်။
စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ သွေးတိုးကို ဘယ်လိုကုသမလဲ?
သွေးတိုးရောဂါ ကုသရာမှာဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းကိုလိုက်ပြီး ကုသမှုများစွာ ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ မတူညီတဲ့ ကုသနည်းပေါင်း ၈၀ ကျော် ရှိနေပါပြီ။ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် သွေးတိုးသူတွေနဲ့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုကြောင့် သွေးတိုးသူတွေကို ဘယ်လိုကုသရမလဲ ဆုံးဖြတ်ရတာက ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ တချို့ဆေးတွေက တစ်ခုနဲ့တစ်ခု တည့်ကြပေမယ့် တချို့က မတည့်ပါဘူး။
တကယ်လို့သင့်မှာ နာတာရှည် စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု ခံစားနေရရင် ဆရာဝန်ဆီသာ သွားပါ။ ဆရာဝန်ကသာ သင်နဲ့လိုက်ဖက်မယ် လိုအပ်တဲ့ကုသမှုကို ပေးနိုင်မှာပါ။
Previous Previous post: နံနက်တိုင်း လန်းဆန်းစွာ အိပ်ရာမှနိုးထစေဖို့
Next Next post: ဂျေရုဆလင်မြို့ကို အစ္စရေးလ်မြို့တော်အဖြစ် ပထမဆုံး အသိအမှတ်ပြုမယ့် အမေရိကန်နိုင်ငံ
နေ့စဉ်အာဟာရမှာ ပရိုတင်းဓါတ် ပါဝင်သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၁၀) ချက်
ကျား၊ မ မရွေး ကိုယ်ခန္ဓါကြီးထွားစေဖို့၊ နေ့စဉ် ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အားအင်တွေကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးဖို့ ပရိုတင်းဓါတ်၊ ကစီဓါတ်နဲ့ အဆီဓါတ်တွေ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအာဟာရ ၃ မျိုးမှာမှ ပရိုတင်းဟာ လူ့ခန္ဓါကိုယ်နဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အသင့်လျော်ဆုံး…
Published: February 13, 20201:59 pm Updated: 2:01 pm
ဟိုးခေတ်က ညမှောင်တာနဲ့ စောစောအိပ်ကြတယ်၊ မနက်အာရုံတက်မှာ အိပ်ရာထပြီး ဆွမ်းချက်တာကစလို့ တစ်နေ့တာအလုပ်တွေစတင်ကြတာ အိမ်တိုင်းလိုလိုပါပဲ။ တိုးတက်လာတဲ့ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ ညအစောပိုင်းအိပ်ဖို့နေနေသာသာ အချိန်တောင်မလောက်လို့ အိပ်ချိန်တွေဖဲ့ပေးနေကြရတာ အများကြီးရယ်။ အလုပ်တွေရှိလို့ညနက်သူတွေရှိသလို ညဘက်အပြင်ထွက်ကြတဲ့ night out အစီအစဉ်တွေကလည်း လူငယ်တွေအတွက် ရေပန်းစားနေကြပြီပေါ့။…
Published: April 1, 20193:30 pm Updated: 3:31 pm
သွေးတွင်း သကြား ပမာဏ နဲ့ကျန်းမာရေး အချက်အလက် များကို အရောင်ပြောင်းလဲ ခြင်းဖြင့်ပြသ ပေးနိုင်တဲ့ tattoo
ဆီးချိုရောဂါရှိတဲ့သူတွေအဖို့ နေ့တိုင်းသူတို့သွေးတွင်းသကြားပမာဏကို ဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်ဖို့ဆိုတာက ဈေးနှုန်းကြီးမားတဲ့အပြင် အချိန်လည်းပေးရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် ကိန်းဗရစ်မြို့ရှိ ဟားဗတ်နဲ့ MIT (Massachusetts Institute of Technology) မှ ပညာရှင်များက ဒီလိုသွေးတွင်းသကြားပမာဏကို အရောင်ပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြင့် ပြသပေးနိုင်မဲ့…
Published: June 27, 20179:53 am Updated: March 6, 20195:34 pm